Ayax ku habsaday degaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe - Awdinle Online
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa lagu arkay degaano & degmooyin ka tirsan Gobolka Shabellaha dhexe Ayax farabadan, kaa soo baabi’iyay dalagyo farabadan oo tacbanaa.
Meelaha ugu daran ee Ayaxa lagu arkay ayaa waxaa kamid ah Degmooyinka Ceelbaraf, Aadan-Yabaal iyo Mahadaay iyo degaano hoostaga, waxaana Ayaxa ka cawday beeralayda iyo xoolo dhaqatada ku nool gobolka Shabeellaha dhexe.
Muqtaar oo kamid ah Beeraleyda ku nool tuulooyin u dhow degmada Ceelbaraf ayaa sheegay in dalagyada Beero dhowr ah oo ku yaalla Gobolka Shabeellaha Dhexe uu baabi’iyay Ayaxa, isla markaana tuulooyin kale uu kusii fiday.
Waxaa uu sheegay in Ayaxa uu Shabeellaha Dhexe uga yimid degaano kale, waxaana uu ugu baaqay Dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Hir-Shabeelle inay waxka qabtaan.
Horay Ayaxa ayaa waxaa uu ku habsaday Beero ku yaalla degaano ka tirsan Maamulada, Puntland, galmudug iyo degaano kale, waxaana halkaasi buufinta Ayaxa ka bilaabay diyaarado ay keeneen Hay’adaha FAO iyo USAID.
Previous articleDhacdo Naxdin leh: Wiil Dhalinyaro ah oo la gowracay
Next articleNin Oday ah oo lagu dilay duleedka Muqdisho & Faah faahin laga helayo